Soo wargalinta booliiska - Youmo
Polisanmälan - somaliska
Waxa fiican in loo soo sheego sida ugu dhakhsaha badan ee danbiga ka dib. Laakiin waxaad danbi soo sheegi kartaa, xataa haddii uu wakhti badan ka soo wareegay. Halkan ayaad ka ogaanaysaa sidaad u sameynayso soo wargalinta booliiska.
Wac 112 haddii ay arrintu degdeg tahay ama haddii uu falka danbigu wali sii dhacaayo. Waxaad sidoo kale wici kartaa 112 haddii aad aragto shil, haddii meel gubanayso ama haddii qof u baahan yahay ambulaans.
Soo wargalinta roondada booliiska.
Haddii uu booliis kugu dhow yahay ayaad iyaga toos u wargalin doontaa.
Wac 114 14.
Wac lambarka booliiska ee 114 14 haddii lagu xadey. Sidoo kale waa halkan meesha aad waceyso haddii uu wakhti ka soo wareegay marka uu danbigu dhacay.
Ka soo wargalinta internedka.
Internedka ayaad ka soo wargalin kartaa haddii wax lagaa xaday.
Tag saldhig booliis.
Saldhiga booliiska ayaad tusi kartaa dhaawacyada iyo cadeymaha kale. Waxaad usii kaxeysan kartaa qof haddii aad halkaa tageyso.
Sababtee baan ashtakeyn dembi ugu soo gudbiyaa booliiska?
Waxa wanaagsan in fal danbi loo soo sheego booliiska, sababo badan darteed.
Dadka danbiga galay waa la xukumi karaa.
Waxaad dib u heli kartaa wixii lagaa qaatey.
Waxa fududaaneysa in caawimo laga helo ururrada caawiya dhibanayaasha.
Adiga ayaa niyad ahaan si ka wanaagsan dareemaaya markaad soo wargaliso booliiska.
Maxaa la iga caawin karaa?
Waxaad sii kaxaysan kartaa qof aad garanayso marka aad wargalinta booliiska sameynayso.
Waxaad taageero iyo caawimo ka heli kartaa brottsofferjour, waa urur caawiya dadka danbi laga galay.
Waxaad adigu caawimo ka heli kartaa haddii aad ka cabsooneyso qofka danbiga ku soo gaadhsiiyey.
Markaad dhibane tahay ayaad sidoo kale inta badan xaq u leedahay garyaqaan ku caawiya xiliga baadhitaanka hore iyo xiliga maxkamadada. Uma baahnid inaad lacag ka bixiso taas. U sheeg booliiska ama xeer ilaaliyaha inaad doonayso caawimadaas.
Waxaad sidoo kale caawimo ka heli kartaa haddii aad baqaneyso/cabsooneyso ama cid danbi kaa gashay ay kuu hanjabtey. Qofkaas waxa laga mamnuuci xidhiidhka, markaas oo aanu ku soo booqan doonin, ku soo wici doonin ama si kale kuula soo xidhiidhi doonin. Waxaad in xidhiidhka laga mamnuuco ka dalbanaysaa booliiska.
Muxuu doonayaa inuu boolisku ogaado?
Waxa u booliisku doonaayo inuu ogaado waxay ku xidhan tahay danbiga uu khuseeyo. Wayaalahan waa inaad markasta sheegto:
Magacaaga, meesha aad degan tahay iyo lambarka telefoonka.
Waxa dhacay iyo cidda ku lugta laheyd.
Sidoo kale waa inaad u diyaar garowdo inaad ka hadasho waxan:
Meesha iyo xiliga uu danbigu dhacay.
Haddii uu danbigu keenay wax dhaawaca iyo waxa ay yihiin kuwaasi.
Haddii aad raadsatey daryeel caafimaad iyo haddii aad ka fikireyso inaad sidaas sameyso.
Waxa la waayey ama la xadey magaciisa iyo noociisa.
Haddii uu danbigu ka dhacay internedka, waa inaad sheegto waxa dhacay.
Booliiska ayaa dooran kara inuu baadho raadka danbiga. Sidaas darteed waa in aanad dhaqin, masaxin ama wax ka badalin waxyaabaha yaalla meesha uu danbigu ka dhacay.
Kadib ayaad wax ku dari kartaa ama ka saari kartaa soo wargalinta.
Ma dhacday in adiga ama qof kale loo geystey fal dembi ah?